Maxaad kula talin lahayd Serena oo gabadheeda ay ilko u soo baxayaan?! | Saxil News Network
Maxaad kula talin lahayd Serena oo gabadheeda ay ilko u soo baxayaan?!
Gabadha haysata koobka tennis-ka, Serena Williams, waxaa suuragal ah in ay la kulmeyso dhibaatadii ugu wayneyd, waxayna taageerayaasheeda baraha bulshada waydiisatay in ay kala taliyaan sida wax looga qabto gabadheeda oo ilko ay u soo baxayaan.
“Ilka soo bixidda way dhibbadan tahay,” ayey u sheegtay asxaabteeda.
Waxay tilmaamtay in xabag, shukumaan qabow ama ay u fasaxdo in ay faraheeda dhuuqdo. Waxay sido kale sheegtay in ay dhabta ku hayso illaa ay ka hurdeyso.
Gabadheeda oo lagu magacaabo Alexis Olympia Ohanian Jr, waxay dhalatay 1 Sebtembar.
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @serenawilliams
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @serenawilliams
Dadka Serena asxaabta kula ah baraha bulshada waxay siiyeen talooyiin kala duwan. Kuwo badan waxay soo jeediyeen isticmaalka faraanti cinjir ah oo caruurta ilkaha u soo baxaya loo sameeyay.
Qaar kale waxay ku taliyeen in qudaar la qaboojiyay ay siiso ama baraf (maro lagu duubay ama wax jilcan). Sidoo kale qaar baa waxay ku taliyeen in buskut la siiyo ama kareem loogu talagalay ilka ay u mariso.
Qaar kale waxay kula taliyeen in gabadha ay u ogolaato in ay ruugto cirifka bustaha ama foodaraha, ama ay siiso xanuun baabi’iye loogu talagalay caruurta ama daawooyiin kale.
Waxaa jiro dad soo jeediyay isticmaalka caanaha naasaha, haddii weli ay naaska nuugeyso, ama ay naaska siiso illaa gabadha uu ka ba’ayo cuncunka ay ciridka ka dareemeyso.
Cabsi maka qabtaa caanaha been abuurka ah ee caruurta?
Lacag maku qaadan lahayd naas-nuujinta canuggaaga?
Dad kale waxay kula taliyeen in ay isticmaasho caleenta shaaha oo la qaboojiyay ama dhega-yaraha shaaha oo ay ku xoqdo ciridka gabadheeda. kuwa kalena waxay u sheegeen in ay sameyso waxyaabihii dhaqanka ahaa.
Qof ayaa soo hadal qaaday in ayeeyadeed ay isticmali jirtay lafo digaag oo lagu dhex kariyay maraq.
Halkan ka akhriso qaar ka mid ah talooyiinka loo jeediyay Serena Williams
Dad badan ayaa ereyo dheeragelin ah u soo qoray, waxayna u sheegeen in arrintan cuncunka ka dhasho ilkaha u soo baxaya caruurta, aysan waqti badan qaadan.
Calaamada lagu ogaado in canugga ay ilko u soo baxayaa waxaa ka mid ah in uu dhuuqo faraha, ama wixii kale ee gacanta u soo gala.
Inta badan caruurta wuxuu cirid-cuncunka ku bilowdaa markay lix bilood gaaraan, inkastoo qaar ka mid ah ay ku dhashaan, kuwana wuxuu ku bilowdaa intaysan afar bilood gaaran.
Sidoo kale waxaa jiro kuwo billaaba marka ay gaaraan 12 bilood, sida ay sheegtay laanta caafimaadka UK ee NHS.
Talooyiinka ay dhaqaatiirta soo jeediyeen
Cinjir caruurta qaniinaan marka ilkaha u soo baxayaan: Cinjirkan waa wax ay caruurta si badqab ah u ruugi karaan. Waxay dejinayaan xanuunka uu dareemayo canugga. Qaar ka mid ah waala qaboojin karaa si ay u dejiyaan ciridka canugga.
Boomaatada ilkaha: Waxaa la mariyaa ciridka caruurta, waxaa ku jira xanuun baabi’iye, kaas oo yareynaya cuncunka ama xanuunka.
Haddii canuggaaga uu ka wayn yahay lix bilood, waxaa la siin karaa cunto wanaagsan si uu u ruugo, sida khudaarta aan la karin. Cad tufaax ah ama karooto ayaa ugu wanaagsan. Sidoo kale waxaad siin kartaa cad rooti ah. Markasta oo uu wax ruugaya, waa in aad la joogtaa si uusan ugu mergan. Ka ilaali buskustka, maadaama sokor uu leeyahay.
Paracetamol iyo ibuprofen: Haddii canugga uu xanuun dareemayo ama kuleylka jirkiisa uugaaro 38C, Waa in aad siiso xanuun baabi’iye aan sokor lahayn ee loogu talagalay caruurta.
La ciyaaridda canugga: In aad la ciyaarto waxay canugga ka mashquulineysaa xanuunka iyo cuncunka uu ciridka ka dareem